Branded PC တွေဟာ စက်တစ်စုံလုံးလုံးရဲ့ စုဖွဲ့လုပ်ဆောင်မှုပိုင်းမှာ Clone PC တွေထက်ပိုပြီး အရည်အသွေးကောင်းပါတယ်။Lenovo ရဲ့ Think Centre A 58 ကတော့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုကို အကြိမ်ပေါင်း ၂ဝဝဝ လောက်အသေးစိတ် စေ့စေ့စပ်စပ် စမ်းသပ်ပြီးမှထုတ်လုပ်တာပါ။
1.Classic 329,000 (Intel Celeson 1.8)2.Classic 348,000 (Intel Pentium E-5200)3.Classic 375,000 (Intel Pentium E-5300)4.Innovator Model 519,000 (Intel Pentium E-7400)5.Innovator Model 568,000 (Intel Quad Q8200) 6.Premium Model 724,000 (Intel Quad Q8400)7.ASUS 244000 (Dual Core 2.6 Ghz)8.MSI 207000 (Celeron 1.8 Ghz)
စပီကာများ ထုတ်လုပ်ရာမှာ နာမည်ကြီးသည့် Microlab ၏ ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သည်။ အသံအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်အပြင် ကိုယ်နှင့်မကွာ အလွယ်တကူ ယူဆောင်သွားနိုင်သည့် Headphone ဖြစ်၏။
1. Microlab small earphone E 5101 ကျပ် 5,0002. Somic 914,991 ကျပ် 3,300 3. Somic 111 ကျပ် 4,0004. Somic Sk 991 ကျပ် 3,2005. Salar A 65 ကျပ် 5,5006. Feiner Fe 635 ကျပ် 4,8007. Fancong FC 75MV ကျပ် 4,800
ွ LG မှ ထုတ်လုပ်လိုက်သော ပလပ်စမာ TV (42 PQ 30 R) ဖြစ်သည်။ HD Ready နှင့် Dynamic Contrast တို့ကြောင့် ပုံရိပ်များကို အထူးကြည်လင် ပြတ်သားသော အနုစိတ်အရည်အသွေးနှင့် သဘာဝကျသောပုံရိပ်များအဖြစ် ကြည့်ရှုခံစားရအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။
Sony T-900 380,000Sony T-90 285,000Sony W-210 180,000Sony W-220 195,000Sony W-230 220,000Canon A-470 100,000Canon A-480 120,000Canon A-1000 180,000Nikon D-40 460,000Nikon D-90 1160,000
Sony KLV-32 S550 489,000Sony KLV-32 W550 850,000Sony KLV-32 V550 700,000Sony KLV-46 S550 1500,000Panasonic P42x70x 750,000Panasonic P42C10C 650,000Samsung LA32A450 480,000Samsung LA32A330 400,00021''Samsung 21B-500 124,00021''Star 27T50 98,00029''Star T2906F 170,00021''LG 21FU4BL 114,00021''LG 21FD 1RG 115,00021''CHANGHONG PF21500 99,000
ွှ Torrent (2) Mitsubishi အင်ဗာတာပန့်၏ ထူးခြားချက်မှာ Inverter စနစ်ပါသောကြောင့် ပိုက်ခေါင်းများမှထွက်သော ရေအားပမာဏကို လျော့နည်းသွားစေခြင်းမရှိဘဲ တည်ငြိမ်မှုရှိစေပါသည်။